Italy CS 1.6 horumarinta server (boost), Ku dar server dusheedii Counter-Strike 1.6
Counter-Strike 1.6 horumarinta server (boost), Italy
Horumarinta server (boost) - Waa horumarinta ee server in liiska server ka. Your server la talaabsan doonaa in liiska server sare iyo sidaa daraadeed waxa loo arki doonaa by badan oo soo booqda. Sidoo kale, waxaad samayn kartaa midab muujiyo aad server si ay u soo jiitaan dareenka, ama aad ku qor kartaa fariin qoraal aad u visiters site. Read more about promotion ›
Dhamaan server ku jira horumarinta (boost) On our website doorsanayaan doonaa ee server Top la periodicity gaar ah. Kasta 20 daqiiqo, oo dhan ee server ka guurto hoos ku jira liiska by mid meel, iyo server la soo dhaafay in liiska socday to top. Sidaas waxaa jira wareegga of server ee horumarinta, iyo sidaas server kasta awood u noqon on top of the server Top.
Clan Busters #5 [CAPTURE THE FLAG][by www.soluga mes.com]
Clan Busters #5 [CAPTURE THE FLAG][by www.solugames.c om]